Fivoriana an-tampon’ny Frankôfônia : Voaresaka ny fanohanana an’i Madagasikara -
AccueilSongandinaFivoriana an-tampon’ny Frankôfônia : Voaresaka ny fanohanana an’i Madagasikara
Nanomboka omaly 11 oktobra hatramin’ny anio 12 oktobra, any Erevan, Arménie, ny fivoriana an-tampon’ny Frankôfônia, na ireo firenena miteny sy mampiasa manontolo, na amin’ny ampahany ny teny frantsay. Anisan’ireo firenena mandray anjara amin’izany i Madagasikara amin’ny maha filohan’ny Frankôfônia azy. Roa taona mantsy no naha-filohan’ny Frankôfônia an’i Madagasikara, nanomboka ny taona 2016, izay nampiantranoantsika ny fihaonana an-tampony faha-16.
Araka izany, ankoatra ireo nodinihina manaraka ny fandaharam-potoan’ny fivoriamben’ireo filoham-panjakana sy governemanta amin’ireo firenena mpikambana, voaresaka manokana ihany koa ny fanohanana an’i Madagasikara amin’ny fikarakarana sy fanatanterahana ny fifidianana ho Filoham-pirenena 2018. Voalaza fa manohana hatrany ireo firenena mpikambana eo anivony ny Frankôfônia, amin’ny alalan’ny Organisation Internationale de la Francophonie, na ny OIF.
Ankoatra izay, anisany nivoitra tamin’ity fivoriamben’ireo firenena mampiasa manontolo, na amin’ny ampahany ny teny frantsay, ny mahakasika ny fanatanterahana ny fifaneken’ny Frankôfônia, amin’ny fanamafisana ny fitoniana, mba hisian’ny fahamarinan-toeran’ny firenena mpikambana. Indrindra eo amin’ny ady atao amin’ny fampihorohoroana sy mpampihorohoro, ny fandraisana an-tanan’ny OIF mahakasika ny fitantanana amin’ny famahana ireo olana isan-tokony amin’ireo firenena mpikambana…
Etsy andaniny, tafiditra amin’ity fivoriamben’ny Frankôfônia ity koa ny fifidianana izay ho sekretera jeneraliny. Marihina mantsy fa mbola Ramatoa Michaëlle Jean no sekretera jeneralin’ny OIF hatreto. Andrasana, araka izany, izay handimby azy eo amin’io toerana io.